Edson Glauber-Thandazela abefundisi-Ukubala ukuya eBukumkanini
INenekazi lethu leNenekazi leRosary kunye neloXolo ukuze	Edson Glauber , NgoMeyi 9, 2020 eManaus, eBrazil:
Nyana wam, ndivela ezulwini ngentliziyo yam yoomama ezele luthando nembeko zikaThixo. Ndityhilela iimfihlo zothando lwam, kunye nentlungu iveliswa yiNtliziyo yam ngenxa yaboni abangenambulelo ababa baninzi kakhulu emhlabeni. Uninzi lwabantwana bam sele bengakhathali kwaye bebanda, bephila ubomi bokugatya ubukho bukaThixo kunye nothando lwakhe. Nyana wam, ndikuthumelele imiyalezo emininzi kuyo yonke le minyaka ukusukela ndandivela e-Amazonia okwesihlandlo sokuqala, kodwa uAmazon wayengafuni nokundiva, ke namhlanje iyabandezeleka.
Mangaki amazwi okuthuka am Nyana wam waphezulu kwaye kuye kwanyanzeleka ukuba siwave kubantwana bam abaninzi abonzakalisile iZona Ngcwele zethu ziinkwantyisa, kwaye uninzi lwala magama luvela kwabo baneentliziyo zabo zigcwele uthando, ubumnandi kunye nokuzinikela kumanyano: Oonyana bam abangababingeleli.
Icawe inxunguphele kwaye iyinkangala kuba uninzi lwabo babhiyozela iNgcwele eNgcwele yo Nyana wam oyiNgcwele abasenalo ukholo, kwaye iintliziyo zabo zinzima kwaye ziqaqadekile ngenxa yokuthandabuza kunye nobomi babo obubi. Thandaza, nyana wam, thandazela abaPhathiswa bakaThixo ukuze bangaphelelwa lukholo okanye ukukhanya kwemiphefumlo yabo, kuba usathana ubahlasele ngenkani, efuna ukubadla ubadlise emlilweni wesihogo. Zinikele ngakumbi ekuthandazeni nasekuzinikeleni ekuguqukeni nasekungcwalisweni ngabefundisi, kuba uninzi luwexuka lukholo lwenene kunye neemfundiso ezishiyiweyo ngu-Nyana wam waphezulu. Ndiyabathanda abantwana bam abangababingeleli kwaye andifuni ukuba omnye wabo alahlwe. Ndifuna ukubabona ecaleni kwam ezulwini. Gobisa amadolo akho emhlabeni kwaye uthi iRosari yam kubo bonke oobhishophu kunye nababingeleli abenzakeleyo hayi emzimbeni, kodwa ngokuyintloko kwimiphefumlo yabo, ngenxa yokungathembeki kwabo kuThixo kunye neenkanuko zabo zehlabathi. Yonke imithandazo, idini kunye nesenzo sokuzihlawulela osenzela zona ziya kuyithuthuzela Intliziyo yam yoSizi neNgenasiphelo. Konke ukuzila nokuguquka okwenzelwe zona kuya kukhulula uninzi lweengxinano ezinzima zesono ezibangela ukuba babe sezingxakini zikaSathana.
Nyana wam uYesu uphefumlele uMoya wakhe oyiNgcwele phezu kwakho [ngesinye], ekupha izipho zakhe kunye neefayile zakhe, ukuze ube nakho ukunceda abantu bakhe abathi ngeli xesha lusizi, bangabi nokholo kwaye badanile. Izipho ezitsha ziya kunikwa ukuze uqhubeke kakuhle nomsebenzi enikubizele kuwo iNkosi niphathiswe yona. UThixo uzokuthatha ngexesha elifanelekileyo kwaye uzokusebenzisa ngakumbi nangakumbi ngokuhambelana nezinto eziyilwe nguThixo ukuze zilunge kwiCawe yakhe eNgcwele nabantu bakhe, yenkululeko yabo kunye nokuhlaziyeka kwabo ngokomoya, ngesenzo sakhe sobuThixo kwimiphefumlo nasezintliziyweni zeentliziyo Uninzi lwabantwana Bakhe oya kuthi ayamkele ngakumbi amazwi akhe nothando lwaKhe.
Thandaza kakhulu ukuba uhlale udityaniswa kunye noBathathu Emnye kwaye uphilele uthando lwabo lobuthixo, usenza ukuthanda kukaYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele, kanye njengokuba abaNgcwele baphila kwaye besenza intando kaThixo kulomhlaba. Khumbula nyana wam: uthando sisiseko sobungcwele. Okukhona uthanda, kokukhona uya kuba nguThixo. Uthando, uthando, uthando, ukuze uhlale uhlanganiswa noThixo kwaye ukuze uThixo abe khona ebomini bakho kuyo yonke into oyenzayo.
Ndiyakusikelela ndikunike uxolo: egameni loYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele. Amen!
← UGisella Cardia - uYesu uya ...
INtetho yeWebhu yesiProfetho…? →